कसरी घर बनाउने पोलिमर माटो बनाउने शिल्प अन
कसरी घर बनाउने बहुलक माटो बनाउन
इरेन गिल | | शिल्प र सामग्री
धेरै पटक मैले समर्पित पोष्टहरू अपलोड गर्दछु पोलीमर माटो, मोल्डेबल हो र असंख्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ शिल्प दुबै मूर्तिहरू बनाउन, कुञ्जीहरू बनाउन वा गहना बनाउन। यो एक सामग्री हो जुन मलाई मनपर्दछ र योसँग काम गर्न पनि धेरै रमाईलो छ।
एकमात्र दोष भनेको मूल्य हो किनकि यो अत्यधिक महँगो होईन, तर यो किन्न यो कत्ति महँगो छ कि हामी के गर्न जाँदै छौं भन्ने बारे हामीलाई यकिन छैन भने वा हामी यसलाई कसरी दिने भनेर जान्ने छौं भने। राम्रो प्रयोग। त्यो कारणले गर्दा, आजको पोष्टमा म बनाउनको लागि एक विधि अपलोड गर्छु घर बनाइएको बहुलक माटो र त्यसैले तपाईं परीक्षण र सामग्री अधिक धेरै आर्थिक रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ
La बहुलक माटो, Fimo रूपमा पनि चिनिन्छ, रचनात्मकता र कल्पनाको यस संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो। यसको लागि धन्यबाद हामी सबै आकारहरू सिर्जना गर्न सक्छौं जुन हाम्रो दिमागमा देखा पर्दछ र अविश्वसनीय परिणामहरू भन्दा बढिका साथ। तपाईलाई उसको बारेमा चाहिएको सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्!
1 पोलीमर माटो भनेको के हो?
2 बहुलक माटो बनाउनको लागि सामग्री
3 कसरी घर बनाउने बहुलक माटो बनाउन
4 पोलीमर माटो कसरी प्रयोग गरिन्छ?
5 कहाँ पोलीमर माटो किन्न?
6 पोलीमर माटोको सबैभन्दा मान्य ब्रान्ड
7 बहुलक माटो संग शिल्पहरु
पोलीमर माटो भनेको के हो?
हामी एक स्टार उत्पाद संग प्रस्तुत गरेको छ, अब हामी के कुरा गर्दैछौं राम्रोसँग जान्नु पर्छ। पोलिमर माटो एक मोल्डयोग्य पेस्ट हो। निस्सन्देह हामी सबै प्लेडफुट सम्झन्छौं जुन हामी थोरैमा प्रयोग गर्थ्यौं। खैर, यो यो धेरै समान छ। यो युवा र कम जवानले प्रयोग गर्न सक्दछ, किनकि योसँग काम गर्न धेरै सजिलो छ र कुनै पनि प्रकारको समस्याको आवश्यकता पर्दैन।
केवल भिन्नता जुन हामीले प्लास्टिकिनको सम्बन्धमा फेला पार्न सक्छौं त्यो यो माटोले र comb मिसाउन सक्छ। यदि तपाईं दुई र colors्ग मिसाउनुहोस्, तपाईं एक धेरै मूल संगमरमरको प्रभाव प्राप्त गर्नुहुनेछ र यदि तपाईं अझै मिक्सिंग टाइम लम्बाइ गर्नुहुन्छ भने, तब तपाईंले एक समान संयोजन पाउनुहुनेछ।
ID आईडियाहरू प्ले पेंडन्टहरू सिर्जना गर्न
बहुलक माटो बनाउनको लागि सामग्री
1 टेफ्लन भाँडो.
१ कप सेतो स्कूल गोंद (यहाँ किन्नुहोस्).
१ कप कर्नस्टार्च.
Table चम्मच खनिज तेल.
१ ठूलो चम्चा नींबू.
पाउडर स्वभाव विभिन्न र colors्गहरूको। (यहाँ किन्नुहोस्)
हामी एक Teflon भाँडा मा सबै सामग्री मिक्स हुनेछ कम गर्मी मा तातो राख्न। यदि हामी आटाको र color्ग लिन चाहन्छौं भने, हामीले चाहिएको र color्गको पाउडर पात्रा सामग्रीमा राख्नेछौं, अन्यथा आटा सेतो हुनेछ।
एक पटक हामीसँग Teflon भाँडोमा सामग्रीहरू छन् हामी तातो दस मिनेट को लागी मिक्स गर्नेछौं आटा बाँकी नभएसम्म त्यसपछि, यसलाई तातोबाट हटाउनुहोस् र यसलाई चिसो दिनुहोस्। त्यसोभए यो राम्रोसँग र व्यवस्थित बनावट नभएसम्म यसलाई घुमाउनुहोस्। अन्तमा, यसलाई सुरक्षित गर्न तपाईले यसलाई एयरटिग जारमा राख्नु पर्छ।
माथिको फोटोमा तपाईले बनेको टुक्राहरू देख्न सक्नुहुन्छ पोलीमर माटो कि तपाईं आफै गर्न सक्नुहुन्छ।
पोलीमर माटो कसरी प्रयोग गरिन्छ?
अब हामी जान्दछौं कि यो मोल्डेबल पेस्ट हो, हामीले जानकारी पूर्ण गर्नुपर्दछ कि यो माटो कसरी प्रयोग हुन्छ वा कसरी उपचार गरिन्छ। सबै भन्दा पहिले, हामी यसलाई आकार दिनु पर्छ। यो गर्नका लागि तपाईले एउटा फिगर र तपाईं आफ्नो हात संग ढाल्नेछ। यो गर्मी संग, यो माटो संभाल गर्न सजिलो र सजिलो हुनेछ। एकचोटि तपाईंले आकृति सिर्जना गरिसकेपछि, तपाईंले यसलाई चुँडोमा लैजानुपर्नेछ। हो, तपाईं केही मिनेट को लागी पारंपरिक चुलीमा छोड्नुहुनेछ। माटोको प्रत्येक कन्टेनरमा, तिनीहरूले तपाईंलाई छोड्नु पर्ने समयलाई संकेत गर्दछ तर सामान्य नियमको रूपमा यो प्रायः १ 15 मिनेट जति हुन्छ। जब हामी यसलाई ओभनबाट हटाउँछौं, यसलाई चिसो र यहाँबाट, तपाईं यसलाई काट्न वा तपाईंले बनाउनु भएको चित्रलाई रंगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो को रूप मा सरल !.
कहाँ पोलीमर माटो किन्न?
हामीले जानु पर्ने पहिलो स्थानहरू बहुलक माटो किन्न सक्षम हुनुहोस्, स्टेशनरी स्टोर र शिल्प स्टोरहरू छन्। यो भन्नु पर्छ कि, यो एक बढ्दो प्रसिद्ध उत्पादन हो, यद्यपि यी सबै स्थानहरु मा एक हुनेछैन। कहिलेकाँही यो हाम्रो लागि अलि जटिल हुन सक्छ, तर हामी जहिले इन्टरनेट पाउनेछौं। त्यहाँ धेरै पृष्ठहरू छन्, शिल्पहरूका पनि जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खरै ती खोज्नु पर्छ जुन धेरै शिपिंग लागत छैन किनकि हामी अन्तिम मूल्य आवश्यक भन्दा बढी जान चाहँदैनौं।
कसरी सेतो र सुन टोनमा माटोको झुम्का बनाउने चरण-चरण
पोलीमर माटोको सबैभन्दा मान्य ब्रान्ड
हामीले सुरुमा उल्लेख गरेझैं यस सामग्रीलाई फिमो पनि भनिन्छ। जे होस् यो याद राख्नुपर्दछ कि फिमो माटोको विशिष्ट ब्रान्डको नाम हो र यो जेनेरिक नाम होईन। ठिक छ, यो बेसबाट शुरू गरेर, तपाईंलाई थाँहा छ कि यस नाम अन्तर्गत तपाईं स्पेनमा माटो पाउन सक्नुहुन्छ। यस भित्र तपाईंसँग दुई प्रकारका हुन्छन्।
Fimo क्लासिक: यो मोल्ड गर्न अलि गाह्रो छ, तर बढी टिकाऊ पनि हो।
Fimo नरम: यो अब प्रयोग गर्नका लागि तयार छ। तर निस्सन्देह, यो अलि बढी नाजुक छ र सजिलै तोड्न सकिन्छ।
अर्को तर्फ, तपाईं ब्रान्ड पनि भेट्टाउनुहुनेछ Sculpey र Kato। त्यसोभए, तपाईंसँग उनीहरूसँग कार्य गर्न सक्षम हुनको लागि अब उपरान्तहरू छैनन्।
यो सानो र साधारण आंकडाका साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ तर पक्कै पनि, तपाईं चाँडै आफ्नो कल्पना छोड्नुहुनेछ र कलात्मक शिरा केहि सेकेन्डमा कसरी बाहिर आउँदछ हेर्नुहोस्। के हामी काममा तल झर्छौं?
बहुलक माटो संग शिल्पहरु
धेरै मानिसहरू सोच्दछन् कि संग पोलीमर माटो तपाईं केवल तथ्या make्कहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, र यद्यपि यो तपाईंलाई प्राय: फेला पार्ने हो, यस प्रकारको माटोले अझ धेरै सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं आंकडा बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईं सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंलाई सुरु गर्न सजिलो हुन सक्छ सजिलो पुतली र केहि विवरण सहित। इन्टरनेटमा तपाईले फोटोग्राफीमा धेरै "स्टेप बाय स्टेप" पाउनुहुनेछ जसमा उनीहरूले तपाईंलाई फिगरको प्रत्येक भाग मोडल गर्न सिकाउँछन्।
सामान्यतया बनाइएका केही आकृतिहरू सरल र धेरै फेसनशील हुन्छन्, तिनीहरू कावैई शैलीका फूडहरू हुन्। किचेन थप्न यो सामान्य छ, तिनीहरूलाई झुम्का, नेकलेस वा पेन्सिल वा कलमको लागि सजावटको रूपमा राख्नुहोस्।
साथै तपाईं फूल र बोटहरू पी बनाउन सक्नुहुन्छ pसजाउनु। परिणाम धेरै राम्रो छ। कटर र उपकरणहरूको साथ आफैंलाई मद्दत गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ। एउटा विवरण, तपाईं प्यास्ट्री कटरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनभने प्यारोन्ट वा कुकी कटरहरू माटाका साथ प्रयोग हुने समान हुन्।
तपाईं देख्नुहुनेछ कि एक सानो अभ्यास संग तपाईं पनि एकदम यथार्थवादी फूल बनाउन सक्नुहुन्छ।
मैले पहिले नै उल्लेख गरिसकें, तपाईंले केवल संख्याहरू मात्र बनाउनुपर्दैन, यो डु boat्गाको सजावटs राम्रो विकल्प हो। तपाईंसँग हजारौं विचारहरू छन् जुन तपाईंलाई प्रत्येक दिन प्रयोग गर्ने ती गिलास जारहरू सजाउन र रीसायकल गर्न प्रेरित गर्दछ। साथै, यदि तपाई पोलिमरिक बेकि clay माटी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईलाई पूरै टुक्रा भट्टीमा राखी कुनै समस्या हुनेछैन, सिसा पूर्ण रूपमा समात्नेछ। सावधान रहनुहोस्, यस अवस्थामा प्लास्टिकको क्यानको प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईंको काम एकदम नराम्रोसँग अन्त हुनेछ।
यी सबै बाहेक, त्यहाँ बहुलक माटोको संसारमा बढि नै प्रख्यात सजावट प्रविधिको हो जुन "मिलफिएरी" वा स्पेनी भाषामा "हजार फूल" भनिन्छ। समावेश गर्दछ पोलिमर माटोको टुक्राहरू सँगै जोडेर ट्यूब बनाउँनुहोस् जुन स्लाइसहरूमा काटिएको छ र तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको रेखाचित्र देखाउँदछ, या त अमूर्त वा एक विशिष्ट छविको साथ। सुरुमा, फूलहरू सिर्जना गरिएको थियो, तर यो विकास भएको छ र अब तपाईं सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ।
म आशा गर्छु कि तपाईले यो उपयोगी पाउनुहुनेछ र अर्को समय सम्म DIY.
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प र सामग्री » कसरी घर बनाउने बहुलक माटो बनाउन
धेरै राम्रो लेख, यसलाई सेयर गर्नु भएकोमा धन्यवाद, तपाई आफैले बहुलक माटो बनाउनको निम्ति त्यस तरीकाबाट थाँहा पाउनु हुन्न, अब यसलाई अभ्यासमा राख्ने समय आइसकेको छ।
हेलो, माफ गर्नुहोस् पाउडर टेपेरा के हो? म मेक्सिकोमा बस्छु र म निश्चित छु कि मैले तपाईंलाई सहि बुझेको थिएँ भने, यदि पात्राको मतलब तपाईले पाउडर पेन्टको अर्थ लगाउनुपर्दछ र यदि त्यो त्यो तरकारी हो वा कसरी?
नमस्ते, मलाई थाहा भयो कि तपाईं खनिज तेललाई साधारण तेल वा अन्य तेलसँग बदल्न सक्नुहुन्छ कि?
नमस्कार, दुई प्रश्नहरू
पाउडर तापक्रम के हो? यो anilines हुन सक्छ? जुन म चिसो पोर्सिनको लागि प्रयोग गर्छु र यो लगभग समान सामग्रीहरू छन्
२. ओभन अनिवार्य छ र / वा माइक्रोवेवले काम गर्दछ?
बियान्का स्किबर भन्यो
यसो नभन कि यो बहुलक माटो हो, तपाईं घरको बनाएको पेस्ट, चिसो पास्ता वा फ्रान्सेली चिनियाँ माटा बनाउँदै हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई त्रुटिमा नपार्नुहोस्, पोलिमर माटोलाई भान्सामा बनाउन असम्भव छ किनकि यसले यसको तयारीमा जटिल रासायनिक प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछ।
बियान्का स्किबरलाई जवाफ दिनुहोस्
कृपया तपाईंको पोष्ट सच्याउनुहोस्, यो पोलीमर माटो होइन, यो घरेलु पोर्सिनको प्रकार हो। पोलिमर माटोलाई जटिल रासायनिक प्रक्रियाहरू चाहिन्छ, जसको नामले सlies्केत गर्दछ, यो एक पोलीमर वा पीभीसी प्लास्टिक हो जसलाई पूरा गर्न पूर्ण र सुसज्जित प्रयोगशाला चाहिन्छ। व्यक्तिहरुलाई भ्रममा नपार्नुहोस्, म एक पोलीमर क्ले मोडलर हुँ र यो केहि चीज हो जुन मसँग काम गर्छु।
मानिसहरूलाई भ्रमित नगर्नुहोस् !!!
तपाई के भन्छन् पोलीमर माटो होइन।
पोलीमेरिक एक पेस्ट हो जुन पीवीसीमा आधारित हुन्छ, प्लास्टिक बहुवचन धेरै अणुहरू (मोनोमर्स) विनाइल क्लोराइडबाट बनेको हुन्छ। विनाइल क्लोराइड पोलीमराइजेसन प्रक्रिया अत्यधिक विषाक्त छ र हर्मेटिकली मोहर गरिएको रिएक्टरहरूमा कारखानाहरूमा हुने गर्दछ।
नमस्कार, शुभ अपराह्न ,, यस प्रकारको शिल्पका लागि चुलो अनिवार्य छ?, अग्रिम धन्यवाद!
मँ सहमत छु, यो बहुलक माटो होईन, यो घर बनाइएको चिसो पोर्सिलेन हो। यो चुलोमा भत्काउन कत्ति गाह्रो छ, सुक्खा दिनुहोस्, यदि त्यो टुक्रालाई पानीमा डुबाइयो भने, यो विघटन हुन्छ, जुन साँचो बहुलक माटोसँग हुँदैन, जुन समस्या बिना पानीमा हुन सक्छ, किनकि यो जस्तो छ। PVC वस्तु
यो केहि शिल्पहरूका लागि राम्रो हो, र बच्चाहरूसँग काम गर्न सस्तो हुन्छ। तर यो समय मा टिकाऊ छैन
भिभियानालाई जवाफ दिनुहोस्
Bellanira मेलेन्डेज भन्यो
धेरै धेरै धन्यबाद, यस उत्पादनको प्रयोगले मलाई धेरै स्पष्ट पार्यो। मेरो देशमा हामीसँग अझै यो उत्पादन छैन, धन्यवाद म पानामा बस्छु, सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन यदि उनीहरूले यसलाई बेचे भने, मैले चिसो चीनी मिट्टीको भाँडोमा काम गरिसकेका छौं। धन्यबाद
Bellanira Meléndez लाई जवाफ दिनुहोस्
लेख उत्कृष्ट छ, हामी PVA, Polvinyl alchocon जो बहाना हावा सुक्खा बहुलक माटो संग बहुलक माटो मिस, र हामी कोरियन माटो सिफारिस किनभने तिनीहरू धेरै राम्रो गुण को हो।
मलाई लाग्छ कि तपाईंसँग एउटा शानदार विचार थियो जब तपाईं घरमा त्यस्तै माटो बनाउने तरिका बताउनुहुन्छ र केमिकल खतरनाक छैन र जसमा पॉलिमर हुन्छ गोंद हो।
Www.lacasadelaarcilla.es लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! मँ तपाइँको पोस्ट ध्यान दिएर पढ्छु, तपाइँले यो स्पष्ट गर्नुभएको छैन कि यो कुन डिग्री पकाएको छ। धन्यवाद अर्जेन्टिना बाट अभिवादन
ट्युनाको क्यान रिसाइक्लिंग गरेर मैनबत्ती होल्डर कसरी बनाउने।
DIY कसरी पानाबाट वसन्त नोटबुक बनाउने।